आरम्भ नाट्य डबलीले धरानमा नाटक मञ्चनको पुनः सुरुवात - ConfuseNepal
११ माघ २०७५, शुक्रबार ११ माघ २०७५, शुक्रबार कन्फ्युजनेपाल0Comments
आरम्भ नाट्य डबलीले धरानमा नाटक मञ्चनको थलानी गरेको छ । धरान स्थित होटल रत्न इनको सभाहलमा यातनाको अन्त्य नाटक मञ्चनबाट धरानमा नाटक मञ्चल पुनः सुरु गरिएको हो । आरम्भ नाट्य डबलीका अध्यक्ष गोपाल देवानको लेखनमा रहेको नाटक आज भारी दर्शकहरुमाझ मञ्चन गरिएको थियो ।
नाटक मञ्चन हुनु भन्दा पहिले केहि औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो । सभाहलमा निकै खचाखच दर्शकहरुको चहलपहलमाझ केहि मुक्तक वाचन गर्दै माहोललाई कार्यक्रम तर्पm केन्द्रित गर्दै आरम्भ नाट्य डबलीकी सदस्य नमिता लिम्बु कार्यक्रम सञ्चालिकाको रुपमा पोडियममा उपस्थि भइन । साधरण औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यमा उक्त संस्थाका अध्यक्ष गोपाल देवानले नाटकको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष देवानले नाटकको बारेमा बोल्नु भन्दा पहिले धरानको नाटक स“गको सम्बन्ध कस्तो ? भन्ने विषयमा बोलेका थिए । वि.संं. १९९७ देखि धरानमा नाटक मञ्चनको सुरुवात भएको हो । जुन समयमा दरवारमा मात्र नाटक हेर्न पाइन्थ्यो । त्यो समय धरानमा भने घरवारमा नाटक थियो । यसरी नाटक स“गको धरानको पुरानो सम्बन्ध २०४५ मा आएर हामि रंगकर्मीहरु नेपथ्यमा हराएका थियौ । यसरी हामि नाट्य जगतबाट गुमनाम हुनु पर्दा निकै दुःख लागेको थियो । नाटकको नशा चढीसकेको हामीमा नाट्य संसार प्रतिको मोह भने अभैm मरेको थिएन । फलस्वरुप वि.सं. २०७२ सालमा पत्रकार सम्मेलन गरि आरम्भ नाट्य डवलीले नाटक मञ्चनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको हो ।
अध्यक्ष देवानले भने धरान नाटकको उर्बर भुमि हो । धेरै रंगकर्मी जन्माएको धरानले अहिलेको स्थिति सम्म थिएटर हल भने पाउनु नसक्नु धरानेहरुको लागी बडो दुःखको कुरा हो । स्थानीय निकायले यस प्रति गम्भिर सोच्नु पर्ने हो तर पछिल्लो समय नया संरचना सहितको स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा कान ठाडो लाएनन । थिएटर हल दिनु त परको कुरा भयो प्रोत्साहन समेत दिनु चाहदैन स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकारले हामिलाई उनीहरु इतर सम्झनु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । कार्यक्रमबाटै अध्यक्ष देवानले भने धरानले अहिले सम्म थिएटर हल नपाए पनि हामी हरेक महिनामा एउटा नाटक मञ्चन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
एउटै इच्छा लिएर देवेश र ससिका बजारमा (भिडियो सहित)
बैनाकाे शिर्ष गीत सार्वजानिक
← धरानमा चलचित्र समर लभ सँगै सायाको चरम चाहना
ब्रिटिश गोर्खा सैनिक हरिबहादुर बुढा मगर भन्छन, सगरमाथा चढ्न खुट्टाभन्दा आँट महत्त्वपूर्ण हुन्छ →
वीपी प्रतिष्ठानमा लकडाउन, अत्यावश्यक काममा मात्र आ…
धरान ९ बगैँचा लाइन स्थित समिट हाइयर सेकेन्ड्री स्क…
बार्सिलोना र बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिगको क्व…
ट्रम्पद्वारा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब…